Ibidda gamoo Gireenfeeliifi dhugaa bahumsa lammiilee Itoophiyaa - BBC News Afaan Oromoo
Ibiddi Landan gamoo Gireenfiilitti ka'ee lubbuu baraartotaafi jiraattotaaf carraa otoo hin kenniin guutummaa gamoo sanaa weerare.
Namootni balichaan jeeqamani beessee otoo hin qabatiin ture mana isaaniitii kan bahan.
Hojjettoonni yeroo balaa waan danda'an yoo gochuu yaalaniyyuu gamoo gutummaan guutuutti ibidda irraa hanbisuu hin dandeenye, namootni isaan lubbuudhaan baraaranis 65 qofa.
Gamoonis cilee uffate.
Sab-himaaleen taatee kana hordofan jiraattotta balaa irraa hafan akka 'yaadannoo addaa' ta'ichaatti jechuun waa'ee isaanii gabaasan.
Hiriyyonni bor wal-arguuf beellama qabataniifi afxirii Ramadaanaa waliin dabarsanii 'nagaa buli' waliin jedhanii maatiin adda bahan achumaan hafan.
''Balaa akkasii takkaa argee hin beeku. Gubachuu gamoo yoon argu namootan achi keessa jiraatan waanin beekuuf naasuudhaan dhaabadheen hafe''
Mogas Birahaan naannoo gamoo kanaatti hiriyaa isaa wajjin waggaa tokkoof jiraatera ''ibidda gara samiitti ol boba'u yoon argu ibidda isa gamoowwan lakkuu Ameerikaa mudate sana natti fakkaate'' jechuun waan gaafas ta'e yaadata.
''Gamoo tokko jala taatee namootni beektu, hiriyootiifi firootni gaafa du'an arguu caalaa waanti nama gaddisiisu hin jiru,'' kan jettummoo Feeruuz Ahimadi. '' Namootni nuti beeknu du'uun isaanii hamma yoonaa sammuu keenya keessaa hin baane.''
Feeruuz, mucaasheefi haadhashee ta'anii balichaa gamoo biraarraa ilaalaniru.
''Mudannoo sana odeessuu hin feenu'' jechuun guyyaa dukkana sana yaadachuu akka hin barbaanne dubbatu.
Image copyright Facebook/Behailu Kebede
Goodayyaa suuraa Haayiluu Kabbadan balichaan booda jireenyasaa qajeelfachuuf yaalaa jira.
Shoongoo dhugaa iyyaafatu
Lammiin Itoophiyaa ibiddi manasaatii akka ka'e shakkamu ''Dogoggorri inni uume hin jiru'' jechuun karaa abukaatoosaa ibsameera.
Shoongoon dhugaa iyyaafatus taateewwan namicha waliin wal qabatan abukaatoosaarraa dhagaheera.
Obbo Bahaayiluu Kabbadaan battala aara argetti bilbila bilbiluusaafi ollootasaatti himuu abukaatoonsaa Raajiiv Meenun dubbataniiru
''Ibiddichi akka tasaa wan uumameef maamilli koo itti gaafatamummaa fudhachuu hin qabu' jedhaniiru abukaatoon
''Obbo Bahaayiluun dhugumaan nama gaarii dha. Waan balleesse hin qabus'' haa jedhaniyyu malee
Firiijiin isaanii dhohuu haaluun nama biraatti qabachuu isaaniifi miiya elekitirooniksii gargaaras ogeessaaan ala hojjechaa turan komiin jedhu namootarraa itti dhiyaachaa ture.
Waggaa 25 gamoo keessa kan jiraatan obbo Bahaayiluun ibiddi mana namootaa yeroo qabatu gargaaruuf fedhii akka qaban shoongoon dhagaheera.
Garuu ''Maal gochuu danda'a ture'' jedhu abukaatonni
Gaafas galgala obbo Bahaayiluun waamicha isaaniif taasifameen buufata poolisii deemuun jecha isaanii kennuun barameera. Abukaaton isaanis kanuma dhugaa bahuuf.
Ammayyuu gaaffiin nageenyaa gamoo Giriinfiil hin deebi'iin jira.
Gamoon akka bara 1974 A.L.A ijaaramee bara 2016 paawundii miiliyoona 8.6 haaromsi taasifameef namooti nageenyaa iddoo isaanii jiraachuu dhabuuniifi dhimmonni wal-qabatoo biroon gaaffii tahanii hafaniiru.
Bulchaan naannichaa gamoon sun gaafa haaromsamu to'attuun autoomaatikaa hin tochamneefi jedhaniiru.
Gamoo darbii 17 qaburra kan jiraatu Mogas ''Bara ammayyaawaa kana keessatti waantonni dhimmi kennamuufii qaban boodeetti yoo hafan na aarsa'' jedheera.
''Gamoowwan keessa jiraannu jabaatoo gatii hin taaneef eeggannoo gochuu qabna' jedheera.
Dhumni gamoo Giriinfiil siyaasa Ingiliizii keessatti mata duree ta'eera.Balaa akkasiif of eeggannoon dursamee taasifame maaliif akka hin taanee koree qoratus dhaabbateera. Namootni buqqa'aniis manni jireenyaa battalaan akka kennamuuf gaafachaa jiru.
Xayyaarri Itoophiyaa nama 465 fe'ate Asmaraatti qajeeluuf qophiirra jira
'Kooriyaa kaabaa Niiwkileera irra bilisa gochuuf muddamuu hin qabnu'